Maitiro ekuisa mafonti muGNU / Linux | Kubva kuLinux
Jose Rodriguez | | Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Kare kare Ndakaverenga kupinda mairi zvakaratidzwa kuti, pachishandiswa script, kuisa maFonti eWindows muFedora. Yakashanda kune vamwe, kwete kune vamwe, zvichibva pamhinduro yavo.
Nekudaro, pane nzira yemanyorero yekuzviita, pamusoro pekuve sarudzo iyo mushandisi wepakati anokwanisa kunzwisisa kuzara kushanda kwekumisikidza.
Iyi nzira inoshanda kune chero kugoverwa kweLinux uye kune chero chirongwa chinoshandisa mafonti esisitimu.
1 Isa mafonti zvakajeka
2 Isa mafonti kubva kumagumo
Isa mafonti zvakajeka
PaInternet pane akawanda emidziyo yemidziyo yemafonti ane marudzi akasiyana emarezinesi. Pakati peavo vakasununguka tinowana dafont.com, FontSpace, Simba Gorosi, pakati pevamwe.
Nhanho yekutanga yekutevera kurodha pasi font yesarudzo yedu. Ini ndakasarudza, seyedzo, Mwaka weMuroyi. Ini ndinosarudza dhawunorodha yekuenda mune yeDownload directory Tinogona kuona kuti iyo yakamanikidzwa faira iri mune yedu dhairekitori dhawunorodha.
Isu tinobvisa mudziyo nekudzvanya kurudyi uye «Buda pano».
Iyo decompression maitiro inogona kusiyana zvichienderana nedesktop nharaunda.
Kana tangoburitswa zipi tichaona kuti iyo faira ine magumo ttf. Kubviswa uku kunoratidza kuti tiri kutarisana nefaira re typographic fonts.
Iyi faira ichafanirwa kuteedzerwa kune / usr / share / fonts dhairekitori, asi pane "diki" tsananguro: isu tinofanirwa kuve nemidzi mvumo yekuiwana.
Naizvozvo tinopinda terminal, tinopinda mukati se mudzi uye isu tinovhura iyo faira yekutsvagira kwedu kwatinoda kana iyo inouya neyedu desktop desktop. Sezvo panguva ino yandinoshandisa Gnome Ini ndichafanirwa kuzviita na Nautilus.
Kana tangova neiyo faira yekutsvaga semidzi, tinoteedzera iyo faira refaira kudhairekitori / usr / share / mafonti. Kupa dhairekitori rekuenda kwakawanda kurongeka, tinogona kugadzira dhairekitori rine zita renzvimbo uye tinamate iyo faira mariri.
Nhanho yekupedzisira ichiri kushayikwa: ipa iyo faira mvumo inoenderana. Kurudyi tinya, «Zvivakwa». Isu tinoenda ku "Mvumo" tebhu uye mu "Boka" uye "Vamwe" sarudza iyo "Verenga chete" sarudzo.
Ready. Kana isu tikazarura LibreOffice tinogona kuona kuti iyo font yakatove kuiswa.
Isa mafonti kubva kumagumo
Kuiswa kwemafaira kuburikidza neiyo terminal kwakareruka sezvazviri graphic, zvine mukana wekuti iwe uite zvese kubva pahwindo rimwe chete. Tinogona kuita izvi zvakananga.
Kutanga tinoenda kune dhairekitori uko iyo fonti yakadzvanywa, «Kurodha pasi».
Unzip iyo faira.
Pane imwe nguva tisina kumanikidzwa, tinopinda mukati semudzi
Isu tinogadzira dhairekitori rine zita rezvinowanikwa mune dhairekitori rekuenda.
Isu tinoteedzera iyo faira kune yekuenda dhairekitori.
Isu tinoshandura mvumo yefaira
Uye voila, isu tine font yedu yakaiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » Maitiro ekuisa mafonti muGNU / Linux
Mupiro wako unobatsira kwazvo, maita basa 😀
Ndinoita zvakafanana, chete ini handiite iyo mvumo nhanho, pachinzvimbo ini ndinoita a sudo fc-cache -vf /usr/share/fonts
Imwe nzira, mausingafanire kuve mudzi, ndeye "kuisa" mafonti ari mumba mako, mu ~ / .fonts dir. Izvo zvakangofanana nezvavanotaura mune iyo posvo, asi pasina kuve mudzi, uye kuteedzera iyo .ttf faira kune yakavanzika dir. Mafonti eimba yako (kana isipo, yakasikwa). Mune yangu kesi inoshanda zvakangofanana (Debian Kuedza).
Musiyano chete unoitika kana uchiisa mu ~ / .fonts ndewekuti mafonti akawanikwa ipapo anongoshandiswa chete nemuridzi wemushandisi, uye kuiswa mu / usr / share / mafonti anoramba ari epasi rose kune vese vashandisi vechirongwa.
Kana kuti ndakanganisa here?
Pindura kune Rima-Sagittarius
Ndizvozvo. Kuvaisa mumushandisi wedu kunongova nazvo chete kuti zviwanikwe muzvikamu izvo. Chimwe chinhu chandisingazive ndechekuti kana mapurogiramu ese aine mukana kune zviwanikwa kubva kudhairekitori repamba.
Paunoshandisa rairo iyoyo, inoiisa yakananga mufaira remushandisi, uye mafonti aya haafanire kugoverwa nevamwe. Kuti mafonti ashandiswe muzvikamu zvese, zvirinani kushandisa nzira inonongedzwa nedzidziso.
Ndatenda zvikuru, izvi zvakakosha kuti uzive kana semuenzaniso uchazoshandisa iyo font pakombuta isiri yako uye isu hatizive iyo password password, semuenzaniso kana uchizopa mharidzo kune imwe nzvimbo nekombuta yakapihwa neimwe.
Magetsi penguin akadaro
Tsamba, muchirongwa chekumisikidza kubva kuchiteshi kana iwe ukachinja mvumo iwe yaunoshandisa "+ w", asi mune inoiswa graphical iwe unotaura kuti dzinofanirwa kuverengerwa-chete. Hazvifanire kunge iri "-w" kubvisa kunyora ipapo?
Pindura Magetsi Penguin
Warevesa. Panyaya iyi ndinofanira kunge ndaisa zvaunotaura uye "+ r".
Ndagara ndiine asiri-system mafonti mu .fonts muKumba. Uye ese Libre Hofisi kana Gimp kana chero chimwe chikumbiro chinozviziva, nenzira iyoyo ndine zvakawanda zviri pedyo nemafonti andinoisa uye kana ndichida kuadzima, ndinongofanirwa kudzima iyo .fonts folda uye hapana shanduko mumafonti iyo yakatouya yakaiswa nekumisikidza.
Isa mafonti muUSr / share / fonts / Ndinoona ichishanda kana paine vanopfuura mumwe mushandisi pachikwata
kana zvisiri, kuva nazvo mu .fonts isarudzo yakanaka.
Kana iwe uchingova nemushandisi mumwe chete, mafonti anogona kuiswa mukati mako $ HOME mu ~ / .local / share / fonts
nenzira, Gnome inounza font installer 😉
Ndakafarira desktop yeXD
Daniel Bertua akadaro
Izvi zvinogona zvakare kushanda:
Pindura kuna Daniel Bertúa
Iwe unofanirwa here kuita zvese izvo kuti uise font? Ndiri kushandisa Kubuntu parizvino uye ndinongofanirwa kubaya kaviri pafaira rakakoswa kuti ndiise font nyowani.
Ini ndinofungidzira kuti GNOME zvakare ine mashandiro echimiro chimwe chete, nekuti zvakapusa kuita ese iwo matanho aunoratidza mukuburitsa.
Kunyangwe ndichifunga kuti zvakanaka kuziva nzira dzakasiyana dzekuita basa riri kubvunzwa, mune izvi zvinoita kwandiri kuti kune dzinokurumidza uye dzinobatsira dzimwe nzira dzekuwana iwo mhedzisiro.
Unoda kuziva sei, mune arch, fedora uye mageia ndakaita chimwe chinhu chandakaverenga kumwe kunhu, gadzira dhairekodhi rine zita .fonts mukati mefaira rako wega uye ipapo unama mafonti aunoda.
$ cp /directory_of_the_fonts_to_import/*.ttf .fonts / (* .ttf ichatumira ZVESE izvo zvine kuwedzerwa. .
Mushure mekupedza kopi unogona kushandisa hofisi yemahara nezvakatumirwa kunze.
Pindura kuna Azureus
Ini ndinofanira kutaura kuti chakandishandira kwaive kungogadzira yakavanzika .fonts faira kumba kwangu uyezve kuteedzera iyo yakadhonzwa font ipapo. Ndiri kushandisa Debian Wheezy neMate Desktop. Kutanga ndakaedza zvinotaurwa nedzidziso iyi asi pasina budiriro ...
Santiago Salvador akadaro
Ndatenda nekutumira kwako.
Zvaive zvakanaka kwandiri pane zvandaida kuita.
Pindura Santiago Salvador
Nei zvakaomarara mu linux kuita chimwe chinhu chinofanirwa kuve chiri nyore?
NetworkManager: Manage ako maratidziro muDebian